Esikhathini esidlule lapho uTshay Peter oshisayo nginqamula izintshevu zakhe zezintshebe emakhanda akhe. "Le ndevu ingumthwalo owengeziwe," wayevame ukusho.
Manje amadevu kanye nesilevu - lokhu akuyona umthwalo, kodwa umkhuba wemfashini, ofuna amadoda amaningi. Echaza ukuthi kungani banquma ukuhlobisa ubuso babo nezimila, amadoda avame ukukhuluma ngezizathu ezimbalwa: "Kuyinto efashisayo," "Kupholile," futhi ejwayelekile kakhulu: "Ngikhohliwe ukugcoba - futhi yagijima ..."
Ngicabanga ukuthi yiziphi zezizathu ezinikezwe ezakho? Uma owesithathu, khumbula ukuthi umhlobiso oyinhloko wobuso bomuntu udinga ukukhuthazeka kanye nolwazi lokuthi ungayinakekela kanjani intshebe namadevu. Phela, ngentshebe "yefosholo" engenasici - lokhu kungenzeka, "ukwesaba", hhayi umhlobiso!
Indlela yokunakekela kahle intshebe namamadevu
Uma ucabanga ukuthi ungayinakekela kanjani intshebe, khumbula ukuthi, okokuqala, kufanele ihlelwe njalo. Lapho ukhona ikhono, ungakwenza ngokwakho. Sebenzisa i-clipper noma izikhali ukuze ubambe kahle intshebe yakho. Futhi izihlathi, lapho ukukhula kwezinwele kungathandeki, uhlambe ngokucophelela.
Ubhedu obude, ungakhohlwa ukukhamba, kungcono hhayi okungenani kanye ngosuku.
Nakuba abantu abaningi, bethi kufanele banakekele kanjani intshebe, bathi kudinga ukuhlanza okhethekile kusho, akunjalo. Ukuze intshebe ibe silky futhi icwebe, ungasebenzisa ama-shampoos nama- conditioners ngezinwele zekhanda. Yiqiniso, intshebe kufanele ihlanjwe kaningi ngaphezu kwesonto ngesonto, ngaphandle kwalokho izinwele ziyokoma futhi kuyoba kubi ukugcina umumo.
Musa ukugeza intshevu yakho nge-sese! Kulokhu, izinwele kuye zizoqina futhi zingavumelekile. Kuphela labo abanesikhumba esibucayi kakhulu ebusweni babo, bangasebenzisa insipho yabantwana engabangeli ukucasuka.
Ukuze unike i-whiskey ngesimo, sebenzisa ama-gel for styling izinwele, futhi uma kunesidingo, khona-ke lacquer. Uzosiza ukugcina isimo semisebenzi engavamile kakhulu yobuciko bezinwele. Kodwa, ukushaya amadevu kanye nesilevu nge-varnish, unake amehlo akho bese uzama ukungaphefumuli, kungenjalo kungabangela ukushisa komphefumulo wokuphefumula noma ukucasula okunamandla kwendwangu yamangqamuzana amehlo.
Phakathi nosuku, hlola ngezikhathi ukuthi umfana wakho ubonakala kanjani. Thatha umkhuba wokugqoka Ikhefu elincane lezintshevu namadevu.
Imithetho yawo wonke amadoda asezintshe
Ungakhohlwa ukuya endlini yokugezela emva kokudla bese uphazamisa izinhlanzi ezitheni zakho. Uma kungenjalo, uzofana nomuntu oyisidolobha esivela ezindabeni zezinganekwane, owayengazi ukuthi unakekele kanjani intshebe yakhe, futhi wayegqoka iphalishi kuwo.
Ababhemayo kufanele bacabange nangomuncu kagwayi, okugcinwe ngokuphelele yizinwele zeendevu. Iyanyamalala ngemuva kokugeza, futhi ngosizo lwamakha amafutha anomsindo. Kuphela lapha, ukuzithenga, khumbula ukuthi kusukela manje uzoqhubeka "ugebha" emagagasi wephunga elikhethiwe! Maye, le ndevu namadevu asondele kakhulu ekhaleni!
Intshevu, njengomthetho, ikhula imfucuza ngaphambili, kunezinwele ekhanda. Ngakho-ke, ngesikhathi esifanele, uqala ukudinga ukugqoka. Idayi ejwayelekile yengwele kule simo ngeke isebenze, ngoba ingabangela ukushisa emlonyeni nasesikhumba sobuso. Nale nkinga, kungcono uhambe uye endaweni enhle, lapho uzokuchazela ukuthi ungayinakekela kanjani intshebe, uthathe idayi engafani nethoni ukusuka kumbala wezinwele, bese uyibala. Kodwa khumbula ukuthi kuzodingeka ukwenze lokhu njalo ngesonto kusukela manje kuze kube manje.
Ekhaya ubuhle salon: hair ukususwa ukhilimu
Ukuzila Ukudla emanzini. Ezenye namathiphu
Izimpawu tento netichasiso kusukela participles - umthetho